Mogadishu Journal » QAYBTA 13AAD 13
Bridgett, siday Fanaxley u ballan qaaddayba markay shaqadii ka baxday ayay soo martay oo ay israaceen . waxay wada fariisteen meel baar ah oo aan sidaas hoteelka uga fogayn. waxay ka sheekaysteen oo kala dhigdhigeen Rooraaye. Fanaxley waxay doonaysey inay ogaato sababta Bridgette iyaduna u neceb tahay Rooraaye oo ayan isku ummadba ahayn. waxyar kaddib waxaa u caddaatay inuu iyadana saaxiib la ahaan jirey waqti dhawr sano laga joogo oo uu si xun u galay, inkastoo aanu iyada ilmo ku rarin oo ay ka digtoonayd. waxay ku heshiiyeen in Fanaxley dacwooto oo ayan oggolaan inuu sidaas isaga tago, Bridgette-na ay caawiso oo u markhaati furto maaddaama ay wax ka ogayd arrinta. markay sidaas ku ballameen way kala tageen Fanaxleyna waxay ku laabatay hoteelkeedii. Markay cabbaar qolkii joogtey ayay inta hoteelka kasoo degtey waxay soo fariisatay baarka hoose. Waxay rabtey inay xoogaa waqtiga isku dhaafiso oo shaahna ka cabto laakiin wax dano dheeraad ah kama lahayn. Markay xoogaa fadhidey waxaa yimid oo meel baarka ka mid ah oo aan sidaas iyada uga fogayn soo fariistay Rooraaye iyo nin kale oo aanay garanayn oo Kenyaati ula ekaa. waxay iska dhigaysey sidii qof aan arkayn, laakiin ilqooreedda ayay kala socotey. Labada nin waxay u ekayd inay wax ganacsi ama hawlo lacag la xariira ka wada hadlayaan. Mar kasta oo ay wejigiisa aragto waxaa ka badanayey Fanaxley xanaaqa umana dulqaadan karayn hadalkiisa ay maqlayso. Inta ciilkii iyo caradii ay iscelin weydey, iyadoo aad mooddo in dhiirrigelintii Bridgette ay wax u tartay, ayay isfahamsiisay inay u sheegto inayan oggolaanayn inuu sidaas isaga dhaqaaqo. haddana waxay garatay inay ugu sheegto meel aan baarka dhexdiisa ahayn. Inta geesinnimo iska baartay oo soo ag-istaagtey ninkii la socdeyna ka cudurdaaratay ayay u sheegtay inay rabto inay qolkeeda ku aragto keligiis marka ay sheekada dhammaystaan haddii aanu wax ka qabin. ”Fanaxley waa ku sidee ma anigaa wax ka qabi kara gabar qolkeeda iigu yeeraysa.” ayuu u celiyey. iyadoo aan waxba hadalkaas kibirka ka oran ayay dhaqaaqday oo waxay aaddey qolkeedii si ay ugu sugto, uguna sii diyaar garawdo dagaalka ay rabto inay qaaddo. Daqiiqado kaddib wuu u yimid isagoo u faraxsan sidii waayadii ay isbarteen oo kale oo innaba muujinayn inay weligoodba xumaani dhexmartay. Waxay u sheegtay inuu khayaanay, oo uu yahay nin musuqmaasuq badan oo tuug ah, ayna wara u hayso inuu Bridgette la saaxiib ahaan jirey, uuna soo xumeeyey iyadana, sidaas darteedna ay dacweynayso, oo ay xabsi ku hubsanayso. Rooraaye waa u qaadan waayey inay sidaas ula hadli karto, weliba iyadoo aan hoos u hadlayn ee afka furatay oo deriska iyo dadka hoteelka ka shaqaynayaba ay maqashiinaysey. Wuxuu damcay inuu iska baxo laakiin Faxaxley baa inta shaarka qabsatay u sheegtay inaanu bixi karayn inta sidaas u galay. Way dareentay inay ku degdegtey arrinta haddana waxay is-tiri haddii adiga oo hadda qarxiyey aad sii deysid armaan dibba loo arag. Waxay kor u qaadday qayladii iyadoo doonaysa in buuqu dad badan soo jiito. ilaa xad taas way ku guulaysatey oo waa lagu soo aruuray laakiin waxaa taas kasoo baxay arrin aanay filayn waayo qaar kammid ah shaqaalaha hoteelka oo ka baqay in arrintu faraha ka baxdo ayaa waxay u yeereen booliis, iyaguna labadiiba inta isku wadeen aya saldhigga geeyeen. Rooraaye markuu saldhigga tegey waxay ula mid ahayd sidii nin yimid maqaayad isaga u shidan oo kan salaan iyo kan la kaftan buu ka bixi waayey. Fanaxleyna inta iyadii qolkii lagu xiri lahaa loo sii wado ayuu inta u dhowaaday si xaasidnimo ah ugu yiri ”Waxaad tahay geesiyad waana kuu qiray haddii aad Nairobi dhexdeeda igula dagaallamaysid adigoo dalkaba sharci darro ku jooga, xataa ku sharciga iyo lacagtaba haystaan ku dhicin inay sidaas sameeyaan”. Dabadeed Fanaxley waxaa lagu xiray qol xabsi ah, inkastoo aanay ogayn wax Rooraaye lagu sameeyey oo aanay isla markaba ogaan karinna way u muqataey inuu meessha kaga tugtug roon yahay oo uu iska maamulanayey.
WAA SOCOTAA. . .